कोरोनाबाट बच्न हात धुन पानी उपलब्ध हुनुपर्‍यो नि ! – Nepal Japan
कोरोनाबाट बच्न हात धुन पानी उपलब्ध हुनुपर्‍यो नि !
नेपाल जापान ७ बैशाख १७:२७
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम हुन नदिन सामाजिक दूरी कायम गर्न र हात धुन आजभोलि काठमाडौंमा पानीको व्यापक अभाव छ । खानेपानीकै लागि नागरिक ट्यांकरको पर्खाइमा लामो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यस्तो परिस्थितिमा स्मार्ट सोलुसन प्रालिले आयोजना गरेको भिडियो सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरुले हात हुन स्वच्छ पानी उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । कोरोनासँगै गर्मीयाममा फैलने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणमा पनि उत्तिकै तयारी गर्नुपर्ने सुझाव उहाँहरुको छ ।
सम्मेलनमा पूर्वसचिव इञ्जिनीयर सुमन शर्माले कोरोनाको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार अहिले चुनौती बनेकाले रोग लाग्न नदिन स्वच्छ पानीको आपूर्तिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सुवोध शर्माले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुका लागि पर्याप्त गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । कोरोना भाइरसबाट बच्न सफा पानी र साबुन वा स्यानिटाइजरले हात धुनुपर्ने सन्देश पुगेको भए पनि सरकारले पानी नै पुर्‍याउन नसकेको उदाहरण दिँदै उहाँले टोलटोलमा राखिएका ट्याङ्की रित्ता भएको बताउनुभयो ।